Ny fitaoman'ny fahavaratra amin'ny mpivady | Bezzia
Ny fiantraikan'ny fahavaratra amin'ny mpivady
Maria Jose Roldan | 08/07/2021 22:00 | fifandraisana
Maneho sy manamarina izany ny angona ary izany dia amin'ny fahatongavan'ny fahavaratra, mpivady maro no mifarana ary misaraka ihany. Zavatra mety hanjary hifanohitra kely izany satria ny mifanohitra amin'izay no tokony hitranga.
Mandritra ny volana fahavaratra lava dia manararaotra ny fotoana malalaka ananany izy mivady. na izany aza misy ady maro izany dia mety hampidi-doza ny fifandraisanareo. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia asehontsika anao ny antony na antony mahatonga ny mpivady maro hisaraka mandritra ny volana fahavaratra.
1 Antony na antony mahatonga ny adin'ny mpivady amin'ny fahavaratra
2 Ahoana ny fomba hisorohana ny mpivady tsy hisaraka amin'ny fahavaratra
Antony na antony mahatonga ny adin'ny mpivady amin'ny fahavaratra
Ny fandaniana fotoana bebe kokoa miaraka amin'ny mpivady dia miteraka ady sy fifandirana raha vao mazava ny andro. Ny sisa amin'ny taona, fahazarana ary manana fandaharam-potoana voafaritra, dia mahatonga ny mpivady zara raha manam-potoana ho azy ireo, izay manakana ny olana sasany tsy hipoitra.
Ny zavatra iray dia ny andrasana hatao amin'ny volana fahavaratra ary ny iray hafa tanteraka dia ny tena vita. Raha tsy tratra ny fanantenana antenaina dia mety hisy ny fifanolanana sy olana sasany ao anatin'ny mpivady.
Matetika tsy misy ny firaisan-kina rehefa mikasa ny zavatra hatao mandritra ny fialantsasatra. Ilay tsy nahatratra fifanarahana, izy io dia efa miteraka olana lehibe ao anatin'ny mpivady.
Ny fandaniana fotoana be dia be amin'ny namanao dia tsy tsara ary afaka manala azy io amin'ny fomba matotra. Na eo aza ny fialantsasatra dia tsara fa ny antoko tsirairay dia mbola afaka manana fotoana kely hanokana ny toerana manokana ananany.
Ahoana ny fomba hisorohana ny mpivady tsy hisaraka amin'ny fahavaratra
Ny lakile mba tsy hiteraka fifandonana dia ny serasera. Zava-dehibe ny miresaka sy mamoaka ny hevitra rehetra hahatratrarana fifanarahana mahasoa ny roa tonta.
Ny fananana fialan-tsasatra dia tsy midika hoe mila mandany 24 ora isan'andro miaraka amin'ny vadinao ianao. Zava-dehibe ny fananana fotoana kely ho anao ary atokanao amin'izay tianao. Ity farany ity dia mifarana amin'ny tombony sy fampanankarena ny mpivady.
Tokony ho fantatrao ny fomba hankasitrahana izay anananao. Tsy ny olona rehetra no tsara vintana manana olona tia azy ireo. Tsy misy zavatra mahafinaritra kokoa noho ny afaka mandany fotoana malalaka miaraka amin'ny olon-tianao. Manomboka izao, ho mora kokoa ho an'ny fifandraisana mihitsy ny zava-drehetra.
Manana fotoana malalaka hiarahana amin'ny olon-tianao, rendrarendra tsy maintsy araraotina. Tapitra tsy ho ela ny fahavaratra ary tsy maintsy miverina amin'ny fanaon'ity taona ity ianao. Tokony apetrakao ao an-tsainao ny sainao ary ankafizo araka izay azo atao ny miaraka amin'ny vadinao.
Raha fintinina, ny fanarahana an'ity andiana toro-hevitra ity dia hahatonga ny fifanolanana sy ny olana hita miharihary amin'ny tsy fahatongavan'izy ireo ary hiafara hatanjaka amin'ny lafiny rehetra ny mpivady Tokony hikarakara ny fifandraisana ianao ary hikatsaka ny mahasoa azy amin'ny fotoana rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ny fiantraikan'ny fahavaratra amin'ny mpivady
Jereo ny kitapo fahavaratra avy any Zara izay manafosafo
Fomba fampiharana ny eyeshadow tsikelikely